मधेसमा बन्दको निर्णयसँगै मोर्चाद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता र सप्तरीमा ४ जनाको मृत्यु | संघीय पोस्ट :: SanghiyaPost
२३ फागुन, काठमाडौं । मधेसी मोर्चाले प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ । साथै उसले आन्दोलन घोषणा गरेको छ । सप्तरी घटनाको विरोधमा भोलि र पर्सि मधेसमा बन्द अर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
सप्तरीमा सुरक्षाकर्मीको गोली प्रहारबाट मृत्यु हुनेहरुको संख्या चार पुगेको छ । नेकपा एमालेको मेची–महाकाली अभियानको विरुद्धमा उत्रेका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेता कार्यकर्ता र सुरक्षाकर्मीबीच सोमबार दिनभर झडप भएको थियो ।
झडपको क्रममा मलेठ गाविस ४का करिब २२ बर्षिया संजन मेहताको सुरक्षाकर्मीको गोली लागी घटनास्थमै मृत्यु भएको थियो । यस्तै डिमनका दिगम्बर झा र मलेठ ४ का पिताम्बर मण्डल र प्रसवनीका आनन्दप्रसाद साहको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ ।
गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका झाको धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लैजाने क्रममा बाटैमा मृत्यु भएको थियो । मण्डलको भने धरान र्पुयाए लगतै निधन भएको बताइएको छ ।
राजविराजमा गर्ने भनिएको सभास्थल परिवर्तन गरेर औद्योगिक क्षेत्रमा गरिएको आमसभा बिथोल्न ठूलो संख्यामा मोर्चा कार्यकर्ता पुगेपछि प्रहरीले गोली चलाएको हो ।
मोर्चाले भने प्रहरीको हुलमा मिसिएका एमाले कार्यकर्ताले ढुंगामुढा गरेको आरोप लगाएको छ । सगरमाथा अञ्चल अस्पतालका अनुसार झडपमा दर्जनौं घाइते भएका छन् ।
घाइतेमध्ये चार जनाको अवस्था गम्भीर छ । गम्भीर घाइते ११ जनालाई उपचारका लागि विराटनगर र धरान पठाइएको छ ।
सप्तरीको राजविराजमा भएको झडपका क्रममा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर ४ जनाको मृत्यु भएलगतै मधेसी मोर्चाको आकस्मिक बैठक बसेको थियो ।
सोमबार साँझ संघीय समाजवादी फोरम नेपालको कार्यालय तिनकुनेमा बसेको आकमिस्क बैठकले घटनामा एमाले नै जिम्मेवार भएको ठहर गरेको छ ।
मधेसी मोर्चाले भनेको छ, एमाले केही शीर्ष नेताहरुको मधेस र मधेसीविरुद्ध विषबमन गर्ने व्यवहार, मधेसी समुदायलाई अपमानित गर्ने, होच्याउने र घोचपेच गनेृ खालका गैरजिम्मेवार, भड्काउपूर्ण एवं उत्तेजक अभिव्यक्ति नै यस घटनाको मुख्य कारक तत्व हुने भन्ने ठहर छ ।’ बैठकमा प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सहमति भएको छ र, भोलि संसद सचिवालयमा लिखित रुपमा नै जानकारी गराउने नेताहरुले बताएका छन् ।
यसका लागि मंगलबार बजे मोर्चाको बैठक राखिएको छ । मधेसी मोर्चाको बैठकले सप्तरीमा प्रहरी दमन भएको भन्दै भत्र्सना गरेको छ । र, दोषीलाई कारबाही गर्न र घाइतेहरुको उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
Posted by admin on Mar62017. Filed under Breaking News, मुख्य खबर, राजनीति. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leavearesponse or trackback to this entry
1 Comment for “मधेसमा बन्दको निर्णयसँगै मोर्चाद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता र सप्तरीमा ४ जनाको मृत्यु”
April 4, 2017 - 1:34 am